नेपालमा पाइने बाइक तथा स्कुटर, मूल्य रु. १.५२ लाखदेखि रु. १.४१ करोडसम्म
काठमाण्डौ । करिब चार महिनादेखिको लकडाउन खुलेसँगै सडकमा चहलपहल बढेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र चलायनमान हुन थालेको छ। योसँगै ठप्पप्रायः रहेको अटो सेक्टर पनि जुर्मुराउन थालेको छ। यसैक्रममा अटो मोबाइल डिलरहरुको संगठन नाडाले विभिन्न सवारी तथा ढुवानीसाधन आयातकर्ता कम्पनीहरुको अधिकतम मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। अहिले नेपालमा...
नेपालमा कारको मूल्य कति पर्छ ? २० लाखदेखि ४.६५ करोडसम्मका विकल्प बजारमा
-धर्म मलाशी काठमाण्डौ । अटो मोबाइल डिलरहरुको संगठन, नाडाले सवारी तथा ढुवानी साधन आयातकर्ता कम्पनीहरुको अधिकतम मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। नाडाले विभिन्न सवारी तथा ढुवानीका साधन आयातकर्ताहरुको अधिकतम मूल्यसूचि(एमआरपी) सार्वजनिक गरेको हो । यहाँ सार्वजनिक भएको नयाँ मूल्यसूचिअनुसार कुन कम्पनीको चारपांग्रे गाडी कुन रेञ्जको मूल्यमा...
काठमाण्डौ । सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेसँगै पठाओ र टुटलले आज बिहीबारदेखि सेवा पुनः सुचारु गरेका छन्। सरकारले गत चैत ११ बाट देशव्यापी लागू गरेको लकडाउन हिजो बुधबारदेखि हटाएको छ। लकडाउन हटेसँगै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। योसँगै पठाओ र टुटलले पनि पूर्ण रुपमा आफ्नो सेवा सुचारु गरेका हुन्। मोटरसाइकलमार्फत भाडामा यात्रु...
फोर्डको दमदार रेसिङ भर्जन सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता
काठमाण्डौ । आफ्ना इलेक्ट्रिक कारको क्षमता प्रर्दशन गर्न कार निर्माता कम्पनी फोर्डले १४०० हर्सपावर भएको कारको रेसिङ भर्जन मुुस्ट्याङ माच–ई कर्सओभर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना सबै इलेक्ट्रिक गाडीहरुको सम्भावित पर्फमेन्स प्रदर्शन गर्नका लागि प्रोटोटाइप मुुस्ट्याङ माच –१४०० प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । डिलरसिपमा...
मौद्रिक नीतिबाट अटोमोवाइल व्यवसायी खिन्न, कर्जाको सीमा ९०% पुर्याइदिन माग
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट प्रस्तुत मौद्रिक नीतिका कारण अटो व्यवसायीहरु खिन्न भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट दिइएका कुनै पनि सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै आडा अटोमोवाइल अशोसिएसन अफ नेपालले खिन्नता प्रकट गरेको हो । नाडाले झण्डै ३ महिना लामो पूर्ण बन्दाबन्दी र हालको आशिंक ...
काठमाण्डौ । राजधानीका अधिकांश रुटमा आज बिहीबारबाट साझा यातायातले बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। करिब साढे ३ महिनापछि साझाले आजबाट बस सञ्चालनमा ल्याएको हो। राजधानीका पहिलेकै अधिकांश रुटमा २६ वटा बस सञ्चालनमा ल्याइएको साझाले जनाएको छ। आवश्यक परे थप गर्दै लैजाने साझा यातायात व्यवस्थापनले जनाएको छ। सरकारले तोकेअनुसार नै सिटभन्दा...
काठमाण्डौ । होन्डा कार इन्डियाले होन्डा सिभिक कर बीएस सिक्स डिजेल मोडलमा लन्च गरेको छ। यो कारको दुईवटा भेरियन्ट भीएक्स र जेडएक्स बजारमा ल्याइएको छ। यी दुवै भेरियन्टको मूल्य क्रमशः भारु २०.७५ र २२.३५ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। होन्डा सिभिकको बीएस सिक्स पेट्रोल मोडलको कार भने गत वर्षको मार्चदेखि बजारमा ल्याइएको थियो। यो डिजेल मोडलको...
काठमाण्डौ । वर्षायाम सुरु भइसकेको छ। पानी दैनिकजसो परिरहेको छ। अन्य मौसमको तुलनामा वर्षायाममा कार चलाउन केही जोखिमपूर्ण हुन्छ। त्यसैले यो मौसममा कार चलाउँदाको विशेष ख्याल राख्नुपर्दछ। यदि बर्खायाममा पनि तपाइँको सफर सुरक्षित गर्नुछ भने यी कुरा अवश्यक ध्यान दिनुहोस्। जसका कारण यो मौसममा कार चलाउँदा तपाइँले सुरक्षित महसुस गर्न...
काठमाण्डौ । मंगलबार नाडा एशोसिएशनका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा राजश्व समितिका उपसभापति कृष्णप्रसाद दुलालले भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालसँग भेटी एक्जीम कोड नवीकरणको म्याद २०७७ साल असोज मसान्तसम्मका लागि थप गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेपालमा ३०००० व्यवसायिक कम्पनीहरु एक्जीम कोडमा दर्ता...
काठमाण्डौ । फोर्डको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जीओ अटोमावाइल्सले फोर्ड एन्डेभरको २०२० मोडलको गाडी नेपाली बजारमा ल्याएको छ। विश्वको पहिलो १०–स्पीड स्वचालित ट्रान्समिशन भएको यस गाडीमा नयाँ २.० लिटर ईकोब्लू डीजेल इञ्जिन राखिएको छ, नेपालमा यसको मूल्य रु १.४९ करोड रहेको छ । १४ प्रतिशतसम्म इन्धन खपतमा सुधार गरिएका, शक्तिशाली अफरोड...
अटोमोवाइल व्यवसायीहरुलाई राहत हुने किसिमबाटै मोद्रिक नीति ल्याइने : गभर्नर अधिकारी
काठमाण्डौ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा गएको गएको ५ सदसिय नाडा प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसंग भेटी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को मोद्रीक नीतिले नेपालको समग्र अटोमोवाइल व्यवसायमा पार्नेे प्रभाव र त्यसको समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ...
काठमाण्डौ। कोरोनाभाइरस महामारीका कारण युरोपमा यस वर्ष कार बिक्रीमा २५ प्रतिशतले कमी आएको छ। युरोपेली कार उद्योग समूहले कार उत्पादन कारखानाले ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्न लागेको जनाएको छ। युरोपेली अटोमोबाइल उत्पादक संघ (एसीइए) ले युरोपेली युनियन र सदस्य राष्ट्रका सरकारहरुलाई उद्योग बचाउन र रोजगारी गुम्न नदिने परिस्थिति...
सुजुकीको ‘नयाँ सुरुवात’ : रु. ३.८० लाख डाउनपेमेन्टमै कार, मासिक किस्ता मात्रै रु. १४ हजार
काठमाण्डौ। नेपालका लागि सुजुकी ब्रान्डका गाडीको आधिकारिक विक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्सको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले कार किन्ने ग्राहकको सपनालाई साकार बनाउने उद्देश्यले ‘नयाँ सुरुवात’नामको फाइनान्स स्किम ल्याएको छ। यो स्किमअन्तर्गत ग्राहकले न्यूनतम ३ लाख ७९ हजार ९०० रुपैयाँ डाउनमेपेन्टदेखि सुजुकीका पेसेन्जर कार र २ लाख ९९...
चढ्नुस् मासिक रु. १० हजार किस्तामै Volkswagen को शानदार कार, अन्य सुविधा यस्ता
काठमाण्डौ । Volkswagen कार खरिद गर्ने इच्छुक ग्राहकलाई आउँदो १ वर्षसम्मको लागि कम किस्ता तिरे पुग्ने अफर अधिकृत बिक्रेता पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रालि लिएर आएको छ। विश्व महामारी कोभिड–१९ द्वारा सिर्जित वातावरणमा धरै व्यक्तिको सुरक्षित सार्वजनिक सवारीसाधनको अभावमा मोटरसाइकल वा कार किनुपर्ने बाध्यता भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वसाधारणसम्म...